अन्डाको आयु कति ? · Aawaj Nepal
बजारमा अस्वस्थकर अन्डाको बिगबिगी !
मापदण्डविपरीतका अन्डा खाँदा अन्डाबाट लाग्ने विभिन्न रोग मानिसमा सर्न सक्ने उनको भनाइ छ । अन्डामा यी २५ थरीका एसपीएफ ९क्उभअषष्अ एबतजयनभल ँचभभ० नभएका अन्डा मात्रै खान योग्य हुन्छन् ।
यी २५ वटा सूक्ष्मजीवबाट मुक्त भएको अन्डा मात्रै खानका लागि योग्य हुने नेपाल सरकारको अन्डा ढुवानी तथा भण्डारण मापदण्डमा उल्लेख छ ।
बिग्रेको वा मिति गुज्रिएको अन्डा खाएमा मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्न सक्छ । अन्डामा जति भिटामिन र पोषणतत्व पाइन्छ, बिग्रँदा त्यति नै खतरनाक जिवाणुहरु पनि । जब अन्डा पुरानो हुन थाल्छ, तब अन्डामा साल्मोनेला भन्ने ब्याक्टेरियाको विकास हुन थाल्छ । साल्मोनेलाको मात्रा बढी भएको अन्डा खाएमा मानिसहरू गम्भीर बिरामी पनि पर्न सक्छन् । बालबालिकालाई हुने फुड प्वाइजनिङको मुख्य कारण साल्मोनेलायुक्त अन्डा नै हो भन्छन् वीर अस्पतालका डाक्टर न्युच्छेमान डङ्गोल । कतिपय पसलेले त केही सस्तो मूल्यमा चर्केको अन्डा पनि बेच्ने गरेका छन् । यस्तो चर्केको अन्डा त आधा घण्टामै बिग्रने र त्यो ज्यादै घातक हुने डङ्गोल बताउँछन् ।
अन्डाको प्रयोग धेरैजसो बालबालिका र वृद्धवृद्धाका लागि हुन्छ । तर मिति गुज्रिएको वा बिग्रिएको अन्डा खाएमा बढी असर भने बालबालिका वा वृद्धवृद्धालाई नै हुन्छ, किनकि उनीहरुको रोगसँग लड्ने प्रतिरक्षा क्षमता वयस्कको तुलनामा कमजोर हुन्छ ।